Lehliselwe esigabeni sokuqala izwe - Ilanga News
Home Izindaba Lehliselwe esigabeni sokuqala izwe
Lehliselwe esigabeni sokuqala izwe
UMEMEZELE izinguquko ezizojabulisa izakhamizi eziningi uMengameli Cyril Ramaphosa (osesithombeni) izolo ngoLwesithathu ngesikhathi ethula inkulumo ngokuxegiswa kwemigomo yokuvalwa kwezwe ngenxa ye-coronavirus, njengoba kubhekwe esigabeni sokuqala sokuvalwa kwalo, esiqala phakathi kwamabili ngeSonto.
Uthe ukuya nokubuya kwamanye amazwe kuzovunyelwa ngaphansi kwemibandela eqinile yezempilo, okubalwa ukuthi umuntu akhombise umbiko oveza ukuthi akanazo izimpawu ze-coronavirus, okhishwe emahoreni awu-72 lowo muntu esuke edolo-bheni abelivakashele.
Namazwe okuvumeleke ukuya kuwona azokhethwa, kuzobhekwa ukuthi isimo segciwane sinjani kulelo lizwe. Uthe uhlu lwamazwe okungayiwa kuwona, luzokwethulwa emphakathini. Esigabeni sokuqala abantu uthi sebengahlangana babe wu-50% wesakhiwo okusuke kuhlanganelwe kusona; ezindaweni ezifana nezokujima nezokubukela amafilimu.
“Emuva kokuxhumana nezinhlaka ezifanele, sibone ukuthi sixegise imigomo yokuvalwa kwezwe sehlele esigabeni sokuqala. Ezindaweni zokuhlanganela ngaphakathi abantu sebengaba wu-250, kanti ngaphandle bangaba wu-500.
“Emingcwabeni sisuke esibalweni sabawu-50 kube ngabawu-100 (abangayokhalisa),” esho.
Umengameli uthe kukho konke lokhu kuyomele ingalitshalwa imigomo yokuzivikela egciwaneni okubalwa ukusebenzisa izibulalimagciwane, wukufaka izifonyo nebanga lokuqhelelana. Imilindelo kayikavunyelwa.
Umemezele nokuthi inhlangano yezokhetho, i-Independent Electoral Commission (IEC) – okulindeleke ukuba ibe nezinketho zokuchibiyela phakathi kukaLwezi (November) noZibandlela (December) isingakwazi ukuvakashela izindawo okubalwa izikhungo zokuhlunyeleliswa kwezimilo nezindawo zabadala, iyokwenza umsebenzi wayo.
“Izindawo ezidayisa utshwala sezingavula kusukela ngoMsombuluko kuya ngoLwesihlanu phakathi kuka-09h00 no-17h00,” esho. uMnu Ramaphosa ubevule inkulumo yakhe ngokuthi leli lizwe lilahlekelwe yimiphefumulo engaphezu kuka-15 000 ngenxa yeCovid-19, wathi ngenxa yokwehla kwezinga lokutheleleka kwabantu, babone kubalulekile ukuthi badlulele kwesinye isigaba sempilo. Uzwakalise ukuthi kuyobaluleka ukuba izwe ligweme ifu lesibili le-Coronavirus, kwazise emazweni asebhekane nalo, likhombise ukuba yingozi enkulu kunelokuqala.
Previous articleUkhethe ukuzilengisa ‘ehalela’ ingoduso yomuntu
Next articleLimshonele osolwa ngokubulalisa udadewabo